Mampaneno Ny Taona Vaovao Ao Japana Miaraka Amin’ny Trondro Vao Nojonoina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2018 7:38 GMT
“Tonga ny ririnina ao avaratry ny firenena (Hokuriku).” Sary an'i Nevin Thompson.
Ny fibanjinana ny Taona vaovao (正月, shogatsu) no isan'ny fety goavana indrindra ao Japana. Efa ho herinandro, nijanona daholo ny zava-drehetra manerana ny firenena satria samy manokana andro vitsivitsy hiarahana amin'ny havany sy ny namany avy ny tsirairay.
Rehefa tafavory ny fianakaviana maro, efa mahazatra ny fihinanana sakafo be, ary midika ho fisesefana hazan-dranomasina izany ao Japana izany.
Amin'ny fotoana malalaka mandritra ilay fotoam-pialantsasatra, efa fanao ny mankany amin'ny toeram-pivarotana trondro ao an-toerana hitady trondro tonga lafatra ho zaraina amin'ny fianakaviana vory ho amin'ilay andro fialantsasatra. Misy ihany koa ireo tsena ahafahana mihinana sakafo hazandrano malaky sady matsiro vao avy eny an-tsambo.
Toy izao no nandanian'ireo mpahay miantsenany andro farany niantsenana trondro tamin'ny taona 2015.
Sarin'i Tsukiji, tsena lehibe indrindra erantany fivarotana trondro
Antsoina matetika hoe tsena lehibe indrindra erantany fivarotana trondro ary malaza amin'ny fanaovana lavanty rehefa madiva haraina i Tsukiji（築地市場）izay hita ao afovoan-tananan'i Tokyo, mifanakaiky amin'ireo toerana fivarotana raitra dia raitra ao Ginza.
Raha misy trondro tadiavinao, hananan'i Tsukiji izany, ary mahasarika olona maro ny tsena ambongadiny mandritra iny fotoana tsy fiasana noho ny Taona Vaovao iny.
A post shared by Masato Sasaki (@masato.sasaki) on Dec 30, 2015 at 7:32pm PST
Ny andron'ny Taombaovao tao amin'ny tsena fivarotana trondro ao tsukiji,Tokyo
A post shared by Andi (@xxiamandixx) on Dec 30, 2015 at 7:25pm PST
Tena tiako loatra ny tsenan'i #tsukiji ao Tokyo.
Miova isaky ny faritra ao Japana ny fomba fihinan'ireo Japone trondro rehefa Taombaovao. Misy any amin'ireo faritra ao Japana no mety hankafy trondro manta, misy faritra hafa zatra mihinana trondro be sira.
Sakafo fanao amin'ny ririnina izay tena ankafizin'ny maro ao Japana izao ny fozabe an-dranomandry. Sakafo mahatsikaiky sy fanao amin'ny fety hifampizaràna amin'ireo fianakaviana mody ao an-trano hankalaza ilay fotoam-pialantsasatra izany.
Mitady fozabe an-dranomandry ho an'ny Taombaovao ve. Jereo ity ry ‘reto a!!! #tsukiji #tsukiji market #crab #NewYear'sholiday #crabhotpot #(Alohan'ny taombaovao)
Tsy mora ny Fozabe. Arakaraky ny karazany, ny Fozabe iray feno izao dia eo amin'ny 7000 yen (60 Dolara Amerikana) eo, kanefa tsy mahagaga ny mahita fozabe 30000 yen (250 Dolara Amerikana) ny iray.
Fozabe “Royale” mena, 30000 yen (250 Dolara Amerikana)
Raha atao hoe misy toerana malalaka eny amin'ny latabatra fivarotana, kanefa ny any amin'ny toerana fivarotana trondro , hanao izay hisakafoanany haingana ireo mpivarotra efa seriny dia seriny amin'ny fangalàna hazandrano mbola tena vao avy nojonoina, toy ity sakafo “kaisen-don” misy nofona trondro lamàtra, sokindriaka ary atodina salmôna ity :
A post shared by @ toshi0toshi2000 on Dec 30, 2015 at 8:02pm PST
[Ito “kaisen-don” misy nofona lamàtra, sokindriaka ary atodina salmôna ity]
Toerana mahavariana ny tsena fivarotana trondro, feno tsenakely sy toerana maro voatsinjarazara ary lahasa mahaliana.
A post shared by おちりえ (@ochirie) on Dec 30, 2015 at 7:59pm PST
Tiako itony lalankely ambadika itony. #tsukiji #faran'nyTaona #AlinTaombaovao #TsenaTsukiji
Hilamina ny fotoam-pialantsasatra hitsenana ny taona 2015/16 ho an'ny tsena Tsujiki raha ny fahitàna azy amin'izao fotoana izao.. Raha mandeha araka ny niheverana azy daholo ny zavatra rehetra, mety hafindra any amin'ny toerana hafa moderna, tsaratsara kokoa atsy ho atsy amin'ity taona ity ny tsena, fotodrafitrasa iray vaovao ao an-tanàna mba hanomezana toerana hananganana izay handraisana ny Lalao Olympika 2020 ao Tokyo.
Tsenan'i Omicho (近江町市場), Kanazawa
Toerana tranainy ao Kanazawa, izay hita eo an-dranomasin'i Japana afovoan'ny “North Country” (Hokuriku) manana ny toerana manokana fivarotany trondro ihany koa, fantatra amin'ny anarana hoe Omicho Ichiba. Ny ranomasina mangatsikan'i Japana no isan'ny hanjonoana fozabe betsaka indrindra ao Japàna, izay no mahatonga an'i Kanazawa sy ireo tanàna manodidina ny sisintany ambony sy ambany hitovy dika amin'ny hoe fozabe an-dranomandry.
カニ? #近江町市場 #ゲロ混み #ギャン混み
A post shared by egs0131 (@egs0131) on Dec 29, 2015 at 10:35pm PST
Fozabe.#omichoichiba #holycowit'scrowdedhere #agh!socrowded (feno olona marobe)
Raha efa hitovy amin'ny haben'ny tanàna iray manontolo ny tsenan'i Omicho, feno mpitsidika hatrany ireo efitrano malalaka sy ny lalankely ao.
A post shared by Tetsuo Mori (@minira.m) on Dec 29, 2015 at 9:00pm PST
Feno olona be mihitsy ny alin'ny taombaovao hany ka tsy afaka akory na dia ny hihetsika aza ianao…Ary dia toy izany mihitsy koa omaly! (tpt)
#omichoichiba #crushingcrowds #jam-packed #I'msotired(reraka be)
Aterina eny amin'ny tsenan'i Omicho raha vantany vao avy eny amin'ny seranan-tsambo ny fozabe. Tsy hahita fozabe vaovao tahaka ity ianao, raha tsy hoe ianao mihitsy angaha no nanjono azy.
Fozabe aman-taonina [Manodidina ny 20000 yen (165 Dolara) ka hatramin'ny 35000 yen (290 dolara) eo ny iray.]
Ny tsenan'i Omicho koa dia toerana ahitàna trano fisakafoana maro ahitàna Sushi “karipetra muhodina” . Raha amin'ny ankapobeny ny “karipetra mihodina” dia lazain'ny olona fa ambany lanja na amin'ny vidiny izany na amin'ny hatsaràny, manome trondro tena vaovao tokoa ireo trano fisakafoana ao Omicho izay tsy fahitanao firy any an-kafa ao Japana.
Trano fisakafoanana mivarotra misy “karipetra mihodina” ,Tsena Omicho, Kanazawa. Sary nalain'i Nevin Thompson.
Fividianana trondro ao amin'ny tsena fivarotana trondro Shiogama ao Sendai (塩釜水産物仲卸市場)
Sendai, ao Avaratra Atsinanan'i Tokyo, koa fanta-daza amin'ny fananany trondro. Matetika ny mponina ao an-toerana no mizotra ho any amin'ny tsena fivarotana trondro ao Shiogama eny amin'ny seranan-tsambo ivelan'ny tanàna hitady zavatra hohanina mandritry ny fotoam-pialantsasatry ny taombaovao.
A post shared by Sei Satoh (@sei_satoh) on Dec 30, 2015 at 4:56pm PST
Tonga nitsidika ilay namako tao an-tsenany aho, fa tena olona fotsiny izany tao izany an! #Japan #miyagi #shiogama #ichiba #NewYear'sEve (alin'ny taom-baovao)
Sendai sy Shiogama samy ao Tohoku manaraka ny sisin-dranomasina Pasifika ao Avaratra Atsinanan'i Tokyo. Io faritr'i Japana io dia malaza amin'ny fananany lamàtra mena.
Efa manakaiky ny taombaovao.Manome hery ho ahy ity toerana ity.#morning #5AM #bountyofthesea(ny hatsaran'ny ranomasina)
[Ilay sarona boaty milaza hoe”Shiogama maguro (Lamàtra mena)”]
Na izany aza, toy ny tsena rehetra fivarotana trondro ao Japana, Shiogama no mivarotra trondro efa tsy hita isa.
年末年始の買い出ししたった〜〜！見てるだけでお腹いっぱい????✨ #shiogama #魚 #魚 #魚 #朝市
A post shared by cam (@cam_0629) on Dec 29, 2015 at 11:45pm PST
Mividy trondro ho an'ny fankalazàna ny taombaovao aho izao! Tonga dia voky aho eto am-pijerena ilay trondro fotsiny.
Manome ny zavatra rehetra ilaina ny tsena fivarotana hazan-dranomasina ao Japana, izay no mahatonga azy ho toerana mety tsara hijerena ireo laro ilaina hahatonga lafatra ny fisakafoanana amin'ny Taombaovao.
Ito lahatsoratra ito dia notadiavina tamin'ny fampiasàna nyEchosec, fitaovana fikarohan'ny media sosialy miainga amin'ny fijerena toerana.